Fikradda muuqaalka ee sida jiilka 3-aad ee AirPods u noqon karo | Waxaan ka socdaa mac
Intii lagu gudajiray 2020 markaan ka imid Mac waxaan daabacnay maqaallo aad u tiro badan oo ka hadlaya jiilka saddexaad ee AirPods iyo kan labaad ee AirPods Pro, jiilal cusub oo laga yaabo ayaa suuqa gali doona rubuca hore ee 2021, haddii cudurka faafa u oggolaado.
Inbadan ayaa ah kutiri-kuteenka in Apple ay cusbooneysiin karto jiilka 3-aad ee AirPods naqshad la mid ah tan laga helay AirPods Pro. Natiijada xantaas iyo male-awaalka Hacker34, wiilkan wuxuu sameeyay fiidiyoow aan ku arki karno sida jiilka dambe ee jiilka 3-aad ee AirPods u ekaan karaan.
Fiidiyowga aan ku arki karno khadadkaas, ayaa soo uruuriyay xanta ugu badan in 2020 oo dhan ay hareereeyeen jiilka soo socda ee AirPods, jiil qaadan doona naqshad la mid ah AirPods Pro, laakiin iyada oo aan lahayn silikoon daboolaya oo u oggolaaneysa in laga soociyo buuqa banaanka si loo bixiyo nidaamka joojinta buuqa firfircoon Maxaa dhacaya haddii aan heli karno waxay ku jirtaa qaabka Pro ee AirPods.
Adoo adeegsanaya inta badan tikniyoolajiyadda laga heli karo AirPods, nolosha jiilka saddexaad ee Apple ee jiilka dhegaha la ' gaaraan 30 saacadood mahad kiis kiiska.
Mid ka mid ah astaamaha aan waligood lagu xaman oo aan ka heli karno fiidiyowgaan, waxaan ka helnaa suurtagalnimada adeegsiga tikniyoolajiyadda 'MagSafe' si markaa gadaasha iPhone-ka aan u awoodno ku soo dallaca kiiska lacag bixinta ee AirPod-yada cusub.
Daahfurka AirPods 3
Marka laga hadlayo taariikhda la bilaabayo, falanqeeyayaasha badankood waxay tilmaamayaan inay imaan doonaan inta lagu jiro qeybta hore ee 2021, taariikh aad u ballaaran oo Apple siinaysa qol badan oo ay kula kulanto isla markaana aan u oggolaanayn dadka isticmaala inay ogaadaan ku dhowaad intee in le'eg ayay AirPod-yadu sii fidin karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Fikradda muuqaalka ah ee waxa jiilka 3aad ee AirPods noqon karo